Black butter truffle - Fikradaha hadiyadaha - VIP truffles
Bogga ugu weynSubagga truffle madow
Subagga shucaaca madow waa wax soo saar leh dhadhan aan caadi ahayn.
Laakiin, waa wax lagu farxo qiimo jaban. Dhaqso oo dalbo si aad u xoojiso diyaargarowgaaga cuntada!
Waxaad jeceshahay inaad ka farxiso qoyskaaga, asxaabtaada adoo siinaya suxuun jilicsan. Waxaad jeceshahay inaad kor u qaaddo suxuuntaada leh alaabooyin gaar ah. Marka, si dhakhso leh u soo saar badeecadan cajiibka ah.
Subagga taraafikada waxaa ku jira dhadhammo dhab ah oo madow oo sidoo kale loo yaqaan Tuber Mélanosporum.
Gawaaridaan waa kuwo aad u qiimeeya khubarada maxaa yeelay waxay siinayaan dhadhan aan macquul ahayn oo ah hazelnut, misk iyo undergrowth. Waxay toosin doonaan burooyinkaaga dhadhankaaga. Subagga tayada leh wuxuu ka kooban yahay 3% xamuul madow iyo midab la'aan!
Subaggaani wuxuu caan ku yahay dhadhankiisa macaan,
Subagga la shiiday ayaa si farxad leh ula yaabi doona burooyinka dhadhanka, oo ay ku jiraan kuwa ugu jilicsan. Xaqiiqdii, subaggu wuxuu dhadhamiyaa dhadhanka shuunka, maxaa yeelay shuftada leh qoraaladeeda isla waqtigaas khiyaanada iyo qalafsan waxay ubaahantahay inay lasocoto diyaargarow fudud.
Subagga madow ee tartiib-tartiib ah ayaa si macaan u dhadhamin doona oo ku dari doona jilicsanaanta suxuunta maalin kasta ama suxuunta fasaxa, suxuunta kulul ama qabow:
Hilibka la dubay, sida subagga maitre d ',
Iyada oo si fudud loo kariyey baradhada,
In risotto ah,
Ku faafi rootiga wanaagsan sida ulaha lo'da
Waayo tagliatelle oo leh subagga truffle, saxan macaan oo aan la aqbali karin.
Badeecad farshaxan oo suuban, qiimo jaban oo ku habboon u martida martidaada ...